भयानक दुर्घटना: शनिबारको दिन शनिले टप्प टिपेर लगे : हेर्नुहोस – PathivaraOnline
Home > समाचार > भयानक दुर्घटना: शनिबारको दिन शनिले टप्प टिपेर लगे : हेर्नुहोस
सुनसरी । सुनसरीको रामधुनीमा शनिबार मध्यान्ह १२ बजे भएको मोटरसाइकल दुर्घटनामा एक युवाको ज्यान गएको छ ।
काभ्रे २ का रमेश क्षेत्रीको दुर्घटनामा मृत्यु भएको हो । सोही दुर्घटनामा इनरुवा बलाहाका नासुराम चौधरी घाइते भएका छन । दुर्घटनामा को २० प ९१६२ नम्बरको मोटरसाईकल दुर्घटना हुँदा मोटरसाईकलमा समेत क्षति भएको छ ।
भात खाने चामल नहुँदा छिमेकीको भरमा !!! बाबु आमाको मृत्युु पछि बालबच्चाको विचल्ली !!
त्यो बिहान तेजबहादुरलाई भतिज लोकबहादुरले देखे, त्यसपछि जे भयो…